Ukungabikho kwempendulo yeNtlalontle kulimaza ishishini lakho | Martech Zone
NgoMvulo, Agasti 3, 2015 NgoMgqibelo, Agasti 1, 2015 Douglas Karr
Sele silichazile ifuthe leshishini inkonzo engeyiyo kubathengi ngokubhekisele kwimidiya yoluntu. Kuthekani ngokuphendula nje? Ngaba uyazi ukuba imiyalezo esi-7 kwezi-8 kwezentlalo ebhekiswe kwiimpawu zayo ayiphendulwanga kwiiyure ezingama-72? Idibanisa ukuba inyani kuye kwakho i-21% yokunyuka kwemiyalezo kwiimpawu kwihlabathi liphela (i-18% e-United States) kwaye sinengxaki yangempela ezandleni zethu.
Kutshanje Ihlumelo Index yeNtlalo, Babala ukuba iipesenti ezingama-40 zemiyalezo zifuna impendulo. Kwaye ayimangalisi into yokuba iipesenti ezingama-40 zabathengi zilushiya uphawu ngenxa yokungasebenzi kakuhle kwabathengi. Kwaye kwicala elingasemva, iimveliso ezibandakanya abathengi ngeendaba zosasazo zifumana i-avareji yamanqaku e-33 aphezulu kubo Amaphuzu okuPhucula iNtengiso.
I-Sprout Social Index yingxelo equlunqwe kwaye yakhutshwa yi-Sprout Social. Yonke idatha ekubhekiswa kuyo isekwe kwiiprofayili zentlalo ezingama-97K zikawonke-wonke (i-52K ye-Facebook, i-45K ye-Twitter) yeeakhawunti ezisebenza ngokuqhubekayo phakathi kwe-Q2 2014 kunye ne-Q2 2015. Ngaphezulu kwezigidi ezingama-200 zemiyalezo ethunyelwe ngelo xesha yahlalutywa ngeenjongo zale ngxelo. Olunye idatha ukusuka kwi-Q1 2013 ukuya kwi-Q4 2013 inokuthi isuke kwingxelo yokugqibela ye-Sprout Social Index ngenxa yotshintsho kwiiprofayili zentlalo ezihlalutywe; Nangona kunjalo, zonke izinto ezihamba phambili zihlala zihambelana.
Isiluleko seengcebiso kwezentlalo kulo mbandela kukuba iimveliso zidibanise ulawulo lweendaba ezentlalo nge iqonga lenkonzo yabathengi ukwenzela ukuba amaqela akho abele imisebenzi ngokufanelekileyo kwaye abantu abafanelekileyo baphendule. Oku kuqinisekisa ukuba uhlaziyo lweendaba ezentlalo ezijolise kwiimveliso ziqala isicelo senkonzo yabathengi esabelwe ummeli othile weenkonzo zabathengi.
Ingcebiso yam eyongezelelekileyo iya kuba kukuqinisekisa ukuba nabani na ophendula ngentlalo unikwa igunya lokuqinisekisa ukuba imiba isonjululwa ngokukhawuleza nangempumelelo. Awunakho ukubeka emngciphekweni ukulibaziseka ekuphenduleni kwiforum kawonkewonke ngenkqubo efuna ukuba amatikiti abelwe enye into kwaye idluliselwe ukulungisa.
tags: Impendulo yenkonzo yabathengiukhathalelo lwabathengi kwezentlaloinkonzo yabathengi kwezentlaloimpendulo kwimidiya yoluntuIxesha lokuphendula kwimidiya yoluntuukuhluma kwezentlalo